5 Kukosha Kufunga Pakusarudza Dhata Warehouse Maturusi - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Big Data Analytics, Bhizinesi Njere, Dhata Warehouse
Image kubudikidza StartupStockPhotos kubva Pixabay
Kuva nekusarudza kurudyi deta rekuchengeta uye deta rekuchengeta zvishandiso zvebhizimusi rako harisi basa riri nyore.
Chekutanga pane zvese, pane zvakawanda zvingasarudzwa pamusika uye yega yega ine seti yakati siyanei yemabasa ekufunga. Pamusoro peizvozvo, kumisikidza deta rekuchengeta pasina chinhu chakanaka chinowedzerana chinogona kunge chakanyanya kuoma. Muchokwadi, zvinowanzo kutora yakawanda maawa einjiniya kuti zviitwe nemazvo.
Haisi zvirokwazvo mhando yechinhu iwe chaungade kushandura pfungwa dzako nezvazvo mushure mekunge watanga kuitisa.
Asi, hapana chikonzero chekutya nazvo. Pane nzira dzekuita kuti maitiro acho ave nyore. Ngatipfuurei nenyaya iyi tinongedze zvese zvaunofanira kufunga usati waita a deta rekuchengeta kuhofisi uye kusarudza yako deta rekuchengeta zvishandiso.
Kutanga, chii chiri dura rekuchengetedza?
Iyo data yekuchengetera iri mhando ye Data management system iyo yakagadzirirwa kugonesa uye kutsigira business intelligence (BI) zviitiko, kunyanya analytics.
Izvo zvinonyanya kuitirwa kuita mibvunzo uye kuongorora uye kazhinji zvine yakawanda yakawanda yezvakaitika dhata. Zvakare, iyo data iri mukati meimba yekuchengetera data inowanzo kuuya ichibva kwakakura nzvimbo yezvisimba senge yekushandisa faira faira uye mashandisirwo ekushandisa.
Basa rakakosha redura matura nderekuisa pakati nekubatanidza huwandu hwakawanda hwe data kubva kunzvimbo zhinji.
Kugona kwavo kugona kubvumidza masangano kuunganidza akakosha mabhizinesi ekuziva kubva kune yavo data kunatsiridza kuita sarudzo. Iyo dura yekuchengetera ichavaka nhoroondo yezvakaitika nekufamba kwenguva iyo inogona kuve yakakosha kwazvo kune data masayendisiti uye vanoongorora bhizinesi.
Nei uchida data matura edura?
Sezvo zvakataurwa, matura edata anoita senge storages yeruzivo iyo inouya kubva kune imwe kana akawanda masosi.
Semuenzaniso, bhizinesi reCommerce rinogona kurishandisa kusanganisa nekubatanidza ruzivo rwevatengi. Inosanganisira makero emaimeri evatengi, rejista yemari, makadhi ekutaura, zvichingodaro.
Kubatsira kwayo kukuru ibasa rayo mukugadzirisa data re business intelligence (BI). Mune mamwe mazwi, maitiro eETL mune yekuchengetera data akakosha pakufamba kwakatsetseka kwedata kubva kune imwe dhizaini yekuvaka kuenda kune imwe.
Ramba uchifunga kuti zvinopesana neyechinyakare, zvivakwa zvemazuva ano zvekuchengetera zvinhu zvinodzokorodza mabasa anobatanidzwa mukugadzira, kugadzira, uye kuisa dhizaini dhizaini dhizaini kusangana nezvinodiwa zvitsva zvebhizinesi.
Ichi ndicho chikonzero chikuru nei makambani mazhinji achishandisa maturusi aya kuunganidza mazano akakosha anovabatsira kuita sarudzo dzakanaka uye dzakadzama.
Chii chinofanirwa kuve chakanaka data dura rekushandisa chine?
Pamusoro pazvose, iwe unofanirwa kutsvaga maturusi ane akakosha maitiro anogona kubatsira bhizinesi rako mune inopfuura imwe nzira:
Kuchenesa data. Ita shuwa kuti maitiro ako anogona kuona uye kubvisa zvisiri izvo, zvisina kukwana, kana zvechinyakare zvinyorwa kubva kune dhatabhesi dheti. Iwe unogona kuzadzikisa izvi nechishandiso chinosefa iyo data rako.
Shanduko yedhata uye kurodha. Izvi zvinoreva kushandura dhata kuita fomati inoenderana nedhatabhesi kuti data kurodha nyore. Mimwe yeaya maturu manejimendi anopa akavakirwa-mukati shanduko.
Bhizinesi rekuchenjera (BI) uye kuongorora data. Dhata rekuchengetera dzimba uye BI mbiri dzakasiyana asi dzakabatana matekinoroji anobatsira mabhizinesi mukuita zvirinani sarudzo. Ita shuwa kuti maturusi ako ane akanaka BI mashandiro nekuti iwo anogona kubatsira kuburitsa zvirinani bhizinesi nzwisiso.
Paunosarudza yako inotevera dhata yekuchengetera chishandiso, ita shuwa kuti iwe unotsvaga zvakakwana kuenzanisa online. Edza kutsvaga webhu kuti uwane yakanakisa Bigquery vs Redshift, Snowflake vs Redshift, kana Snowflake vs Bigquery wongororo. Nenzira iyoyo iwe unowana ruzivo rwehunyanzvi kubva kuvanhu vanopa kuongororwa kwechinangwa kwezvishandiso zvakasiyana.
Tora danho shure uye funga nezve yako kambani kukura. Iri kuwedzera nekukurumidza here? Kana iri zvishoma nezvishoma asi zvechokwadi iri kufambira mberi? Zviri mune zvaunofarira kusarudza chishandiso chine zviyero pamwe nebhizinesi rako.
Sarudza imwe inopa inokurumidza uye isina musumbu sisitimu inogadziridza, isina kuenderera kuongorora. Unoda izvi kuti uone kutevedzera zvinodiwa nemadhata. Sarudza kuti scalable sei yekubatanidza chishandiso inoenderana nekureruka, zviwanikwa, uye mutengo.
Mimwe midziyo inoda kumwe kugadziriswa asi inodhura kwazvo, nepo mamwe maturusi akaenzana. Izvi zvinoreva kuti ivo vanopa kuita kwakaringana kunyangwe kana vashandisi vachiwedzera mamwe maodhi kumatura edata.
Kana iwe uchikwanisa kuzvigadzirisa zvakanaka, zvinogona kuve zvakachengetedza.
Kushandisa michina nezvaanogona
Image kubudikidza Mufananidzo Musanganiswa kubva Pixabay
Ngatitangei izvi nekutaura kuti iyo yechinyakare nzira yekuchengetera dhata yakatotsiviwa neimwe yayo otomatiki imwe. Muchokwadi, zvaida kuitika kugadzirisa zvido zvinokura zvevhoriyamu uye kubvumidza inokurumidza nguva-kune-nzwisiso. Aya maturusi anobatsira kugadzirisa matanho anodzokororwa anosanganisira kugadzira, kugadzira, uye kuendesa dura re data.
Icho chishandiso chinofanirwa kukwanisa kugadzirisa iyo data yekuchenesa maitiro kubva pakunyorwa kweinobva dhata kune kwayo kusimbiswa usati warodha. Izvo zvinofanirwa kuitika kuti uve nechokwadi chekuti isina-kukanganisa data rakatakurwa mudura re data.
Iwe unofanirwa zvakare kufunga kusarudza chazvino chishandiso chinotsigira kufambiswa kwebasa kushandisa michina uye data modhi dhizaini mapatani. Inofanira kupa kushandisa michina padanho rega rega kubva pakugadzira dura rekuchengetera mepu nekugadzira kodhi yeETL kutakura ruzivo mune yekuchengetera data.
Gadzirisa maitiro uye iwe uchadzikisa iyo nguva, mari, uye njodzi dze data yekuchengetedza mapurojekiti.
Sezvo bhizinesi rinowedzera, rinowanzo kuunza nyowani nyowani pamwe nekukura. Kuwedzera kunenge nguva dzose kunosanganisira kusangana kutsva. Zvinoreva kubatanidza kwakasiyana data zvinyorwa, senge makore manyuko, mu-ndangariro mafomati, dhatabhesi, zvichingodaro.
Kubatanidzwa kunowanzo kutungamira mukukura kwevhoriyamu yedhata dzakasiyana. Kune mamiriro erudzi irworwo, zvakakosha kuti usarudze chishandiso chinogona kusanganisa data kubva kune akasiyana mafomu uye masystem eruzivo.
Icho chimwezve chikonzero chekusarudza nehungwaru. Semuenzaniso, iwe haungaite chikanganiso kana iwe ukasarudza scalable uye agile mhinduro yekubatanidza, kuchengeta, uye kubata hombe data.
Chishandiso chinofanira zvakare kuve chakarerutsa dura rekuchengetera, saka ita izvi mupfungwa kana iwe ukatetepa pasi runyorwa uye wotanga kunhonga maturusi ako.
Sezvauri kuona, pane zvinhu zvishoma zvinofanirwa kutarisirwa usati waita sarudzo yekupedzisira pane yako inotevera dura yekuchengetera chishandiso.
Gadzira yakajeka kesi yekushandisa uye iwe unozobatsira yako sangano zvakanyanya kudzikisira pasi runyorwa rwezvishandiso zvairi kushandisa. Mune mamwe mazwi, ita zvese zvaunogona kuti uve nechokwadi chekuti data rako rine zvazvinotora kuti uwane zvido zvebhizinesi rako.